Na Adobe Mgbe mmetụta, ị pụrụ ime ka dazzling ngagharị ndịna-emeputa na fancy visual mmetụta na-eji gị creativity na pụrụ ichetụ n'echiche. Ma dị ka m na onwe ahụmahụ, ọ bụ nnọọ adịghị mfe ka malitere. E nwere nkpoda mmụta usoro n'ihu gị. N'ihi ya, bụ n'ebe a usoro dị ka Mgbe mmetụta na i nwee ike aka gị video na gbara ọkpụrụkpụ mmetụta ọsọ ọsọ na mfe?
Mgbe mmetụta bụ ihe kasị pụrụ iche dijitalụ ngagharị compositing na-edezi software na ahịa. Ọ bụ ike, ma ọ bụrụ na-agaghị ekwe omume, ịchọta ihe Adobe mmetụta Ẹkot ma n'ihi na Windows ma ọ bụ Mac (Mountain ọdụm gụnyere). Otú ọ dị, a na peeji nke ga-agụnye ọtụtụ Adobe Mgbe mmetụta uzo ozo ikpe yiri Mgbe mmetụta. Họrọ Mgbe Mmetụta ọzọ adabara gị na gị chọrọ.
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) - Mee mmetụta na Otu Click
Wondershare Video Editor Na-enye gị ihe karịrị 50 visual mmetụta na kama mee ka gị video na-esonụ larịị. Ọ na-agụnye ihe nile nkịtị video edezi ngwaọrụ gị mkpa. Na ya, ị na-enwe ike ike Hollywood-dị ka n'ụlọ na fim ndị ikwu n'ụzọ, utu aha, mmetụta si sara mbara formats nke videos, ọdịyo na photos. Advanced atụmatụ dị ka Foto dị na-na-Foto dị, ngwa ngwa / ngwa ngwa ngagharị, olu mgbanwe, video / ọdịyo ndekọ ndị dị mfe iji. Gịnị bụ ihe dị mkpa bụ na na nkekọrịta ndị enyi na ezinụlọ dịtụbeghị mfe. Ị nwere ike ịkekọrịta vidiyo na mfe bulite ka YouTube, Facebook, wdg Chekwa na ahazi presets maka playback on obere ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, iPod, Kindle Fire, wdg ma ọ bụ ọkụ DVD ka mma chebe ya. Ọ pụrụ ịbụ ọzọ ka Mgbe mmetụta na compromises ala nke eji na ike.
Apple Motion - A usoro dị ka Mgbe mmetụta maka Mac (Mountain Odum, odum akwado)
Apple si Motion bụkwa a ngagharị ndịna-emeputa na compositing ngwa dị ka Mgbe mmetụta, nke na-ahapụ gị ike gị dazzling animations na 2D ma ọ bụ 3D ohere, ma ọ bụ hazie nkecha utu aha, ikwu n'ụzọ, na mmetụta maka Final Cut Pro, a video edezi ngwa nwekwara mepụtara site Apple . Dị iche iche si Mgbe mmetụta, Motion na-enye gị ezigbo oge nzaghachi. Ọ dịghị mkpa na ijere na-ele gị ọrụ.
Waks - Free Alternative ka Mgbe mmetụta na Windows
I nwekwara ike iji Wax dị ka a fechaa Mgbe mmetụta ọzọ maka Windows nanị, na n'ihi na kpam kpam free. Na Wax, i nwere ike ime compositing na pụrụ iche utịp dị ka Mgbe mmetụta. Nke a free ọzọ omume na-Mgbe mmetụta nwere ike ma na-arụ ọrụ dị ka standalone ngwa ma ọ bụ dị ka a plugin maka software dị ka Sony Vegas. Site na iji ngwa mgbakwunye nkwụnye - Ị pụrụ ọbụna iji DirectX plugins / Windows Movie Onye kere presets / VirtualDub nzacha dị ka Wax Plugins. N'ihi na ọtụtụ graphic kaadị, ọ na-enye ụfọdụ ezigbo oge ma ọ bụ nso ezigbo oge mmetụta.
Eyeon Fusion - Mgbe mmetụta Alternative maka Windows na Linux
Fusion bụ video compositing software ọbụna elu karịa Mgbe mmetụta mere site Eyeon Software Inc. Ọ na ọtụtụ-eji ike visual mmetụta na dijitalụ compositing maka film, HD na mkpọsa ngwá ahịa. Ka ihe atụ, Avatar, Sin City, Lost, Terminator Nzọpụta, wdg na-eji Fusion ime post-mmepụta. Fusion nwere ike na-agba ọsọ na Windows na Linux (iji a ahaziri Wine.)
Blender - ọzọ Free Mmemme Yiri Mgbe mmetụta
Blender bụ a FREE na-emeghe-isi iyi software na-amasị Mgbe mmetụta na ike ga-eji na-eke animated ndịna-emeputa, visual mmetụta, mmekọrịta 3D ngwa ma ọ bụ egwuregwu vidio. Blender si isi atụmatụ na-agụnye 3D ịme ngosi uwe, video edezi, UV unwrapping, texturing, ọmụmụ na anwụrụ ọkụ ịme anwansị, urughuru ịme anwansị, ndụ, na compositing.
Olee otú iji tọghata WLMP faịlụ ka WMV
Olee otú iji tọghata na Ọkụ Wedding Videos ka DVD
Sony Vegas maka Mac: Dezie Videos na Mac OS
Ɛpo Day Video kaadị na Funny V-Day Vidoes
> Resource> Video> Easy-eji Mgbe mmetụta Alternative maka Windows / Mac